Wasaaradda Haweenka oo tababar la xiriira fahamka xaquuqda carruurta u qabatay qeybaha bulshada | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Haweenka oo tababar la xiriira fahamka xaquuqda carruurta u qabatay qeybaha...
Wasaaradda Haweenka oo tababar la xiriira fahamka xaquuqda carruurta u qabatay qeybaha bulshada
Tababar wacyi galin ah oo la xiriirta Fahamka Xuquuqda Carruurta, diyaarinta warbixinta heshiiska Caalamiga ee Axdiga Carruurta ayaa loo qabtay qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka, Saraakiisha hay’adaha Dowladda iyo Bulshada Rayidka.
Siminaarka oo ay soo agaasintay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa socday muddo hal cisho ah, waxaana diiradda lagu saaray inta uu socday wacyigelinta fahamka xuquuqda carruurta.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Insaanka ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Deeq Suleyman Yuusuf oo si rasmi ah u furay siminaarka ayaa sheegay in u jeedka tababarka uu yahay in si fiican qeybaha bulshada looga fahamsiiyo xaquuqda carruurta, isagoo intaa ku daray inay joogteyn doonaan tabbabarada nuucaani oo kale ah.
Madaxa barnaamijyada xaquuqda carruurta ee Wasaaradda Haweenka Maxamed Cabdi Cali oo siminaarka bixinayay ayaa si wacan u sharxay hanaanka ku aadan fahamka xaquuqda carruuurta iyo diyaarinta warbixinta heshiiska caalamiga ah ee xaquuqda carruurta, iyadoo ka qeyb galayaasha ay ka dhiibteen aaraah kala duwan.
Agaasimaha Waaxda Horumarinta Qoyska iyo Xaquuqda carruurta Marwo Faadumo Maxamed Macalin oo soo xirtay siminaarka ayaa sheegtay in tabbarada nuucaani oo kale ah ay yihiin kuwa lagu baraarujinayo qeybaha bulshada, si ay door uga qaataan ilaalinta xaquuqda carruurta.
Xildhibaan Dahabo Suusow oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha shacabka ayaa ka hadashay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo xaquuqda carruurta, waxaana ay hoosta ka xariiqday in ka Xildhibaan ahaan ay door ka qaadan doonaan sidii bulshada loogu wacyi gelin lahaa ilaalinta xaquuqda carruurta.
Previous articleRa’iisul wasaare ku-xigeenka oo shir gudoomiyay shir heer sare ah oo looga hadlayey arrimaha Gargaarka
Next articleDegmada Shangaani oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka